Ibaluleke Kangakanani Imifanekiso Kwisiqulatho Sedijithali?
NgoLwesithathu, Oktobha 3, 2018 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Imifanekiso ngumahluli ophambili esiwuphakamisayo kuwo onke amaqhinga omxholo endiwenzela abathengi bethu. Sichitha kakhulu, nangakumbi kuyilo lwegraphic kunye neefoto kunokuba senza kuphando kunye nokubhala. Kwaye imbuyekezo kutyalomali ihlala ihlawula. Ngokukodwa kwiifoto, ayenzi ngqondo kum ukuba inkampani ichithe i- $ 5k ukuya kwi- $ 100k kubukho obutsha bewebhu kodwa yeqa ukuchitha amakhulu ambalwa eedola